Firaisana tsikombakomba, trafika andramena : mpandraharaha goavana, manampahefana voarohirohy | NewsMada
Firaisana tsikombakomba, trafika andramena : mpandraharaha goavana, manampahefana voarohirohy
Na mihamahery vaika aza ny pesta, mihamafy koa ny fanenjehan’ny Bianco ireo voarohirohy ho mpanao trafika andramena. Niakatra fampanoavana tany amin’ny fitsarana Antalaha ny olona miisa efatra, samy manana ny lazany sy ny toerany any amin’iny faritra Sava iny, omaly.
Hanomboka hiasa amin’ny volana novambra, raha tsy misy ny fiovana, ny Sampandraharaha miady amin’ny kolikoly na “Pôle anti-corruption” (PAC). Mandra-pahatonga izany, manam- pahefana avokoa ny rafi-pitsarana samihafa ampidiran’ny Birao miady amin’ny kolikoly (Bianco) amin’ny antontan-taratasin’ady rehetra. Anisan’izany ny raharaha maha voarohirohy olona efatra amin’ny fanondranana an-tsokosoko bolabola andramena miisa 9.300 ny taona 2013. Avy amin’ny fanomezam-baovao azon’ny Bianco ny nahatonga ny fanadihadiana. Niakatra fampanoavana, omaly alakamisy tao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany any Antalaha, ireo olona ireo. Voalaza fa mpandraharaha mpanondrana entana any ivelany avy any amin’ny faritra tapany atsinanan’ny Nosy ilay olona voalohany, tompon’ireo andramena. Mpitatitra ireo andramena naondrana an-tsokosoko ny faharoa. Tompon’andraiki-panjakana any amin’iny tapany atsinanan’ny Nosy iny kosa ireo olona roa farany voarohirohy.
Tsy misy sehatra na sokajin’olona ho afa-bela
Hita fa manamafy ny ady amin’ny kolikoly ny Bianco ary ao anatin’izany ny fanenjehana ireo mpanao trafika andramena, araka ny fepetra takin’ny vondrona iraisaim-pirenena sy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Vao tamin’ny herinandro lasa teo, nanaovan’ny Bianco fanambarana fikarohana ny olona telo mianadahy amin’ny lafiny trafika andramena. Ahina fa misy tafatsoaka any ivelany ny iray amin’izy ireo, raha ny navoakan’ny fampahalalam-baovao sasany.
Manizingizina ny Bianco fa tsy misy “sehatra” na “sokajin’olona” ho afa-bela tsy hoenjehina, hatramin’ny nanombohana nanatanterahana ny paikady vaovao hiadiana amin’ny kolikoly. Vinavinainy hahomby sy tena hahery vaika io paikady io ary antenaina hahazo vokatra tsara. Amin’izy ireo, mila ny fientanan’ny rehetra sy ny tsirairay isan-tsokajiny izany ary tsy ifampiandrasana sy tsy ialana andraikitra.